तपाईंको कुन -कुन राशि भएका मानिसको पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? – News Nepali Dainik
तपाईंको कुन -कुन राशि भएका मानिसको पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २३, २०७७ समय: १८:२८:५८
ज्योतिषशास्त्रमा जम्मा १२ राशिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सबै राशिका आ-आफ्नै विशेषता रहेका हुन्छन्।
आज हामी तपाईलाई राशि अनुसार पारिवारीक सम्बन्धका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । आउनुहोस् जानौँ कुन राशि हुने व्यक्तिको पारिवारीक सम्बन्ध कस्तो ?
मेषः मेषराशि भएका मानिस हरुले तुला राशि हुने मानिसहरू संगको संबद्ध सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। कन्या र बृश्चिक राशिहुने हरुसंगको संबन्ध नोक्सानदायक हुनेछ भने बाकि अरुराशि हुनेहरुसंग मेष राशिहुने हरुले काम गर्दा राम्रो हुन्छ । पुर्व दिशा मेषराशिको लागि राम्रो रहने छ ।
बृषः वृष राशिमा जन्मिएका महिला तथा पुरुष हरुका लागि तुला र धनु राशि हुने मानिस हरुसंगको सम्बन्ध अतिनै नराम्रो मानिन्छ।
यो राशि हुनेहरुका लागिभने बृश्चिक राशि रबैभन्दा राम्रो राशिका रुपमा हेरिन्छ ।बाकि राशिहरु संगको संबन्ध राम्रो नै रहने छ। दक्षिण तिरको दिशा मा काम गर्दा छिटो सफलता मिल्नेछ ।
मिथुनः मिथुन राशि हुने हरुका लागि धनु राशि सबैभन्दा राम्रो राशिका रुपमा हेरिन्छ। मकर तथा बृश्चिक राशिहुने हरुको संबन्ध खासै राम्रो मान्न सकिन्न । बाँकी रहेका राशिहरुसंग संबन्ध गास्दा राम्रो नै रहनेछ ।पश्चिम दिशा मिथुन राशिको आफ्नो दिशा हो काम कारोबार गर्दा राम्रो हुनेछ।
कर्कटः कर्कट राशिमा जन्मिएका सबै मानिस हरुका लागि मकर राशि हुनेहरुसंगको संबन्ध अतिनै राम्रो मानिन्छ तर धनु र कुम्भ राशिका मानिसहरुसंगको सम्बन्ध भने नराम्रो हुनेछ।अरु राशि हुनेहरुसंग काम कारोबार गर्दा फाइदाजनक रहने छ । बिशेष गरि उत्तर दिशामा काम गर्दा राम्रो नै मानिन्छ।
सिंहः सिंह राशि हुनेहरुले कुम्भ राशि हुने हरु संग काम गर्दा धेरैनै राम्रो हुन्छ। बिशेष गरि मकर र मीन राशि हुनेहरुसंगको सम्बन्ध राम्रो मानिदैन ।बाकि राशिहरुसंग भने कामगर्दा राम्रो नै मानिन्छ। पुर्व तिरको दिशामा काम गर्दा परिवारमा खुसी र प्रगति गराउदछ।
कन्याः कन्या राशिमा जन्मेका मानिसहरुका लागि भने मीन राशि भएका मानिस अथवा स्थानमा बसेर काम गरेमा सोचेअनुसरको सफलता मिल्ने छ।
कन्या राशिको लागि कुम्भ तथा मेष राशि हुनेहरुसंगको सम्बन्ध निकै कमजोर मानिन्छ तेसैले कामकारोबार नगर्नु भएकै राम्रो हुनेछ। अरु बाँकी रहेका राशिहुनेहरुसंगको सम्बन्ध भने राम्रो नै रहने छ । कन्या राशिको लागि दक्षिण दिशा शुभ मानिन्छ ।
तुलाः तुला राशिहुनेहरुले मेष राशि हुनेहरुसंग सम्बन्ध राखेर काम गर्दा राम्रो मानिन्छ। मीन र बृष राशिहुनेसंगभने एकदमै नराम्रो हुन्छ तेसैले कुनैपनि कुराहरु अगाडी नबढाउनुभएकै राम्रो हुने छ।
बाँकी रहेका राशिहरुसंगभने कामगर्दा राम्रो हुन्छ। पश्चिम दिशा राम्रो मानिन्छ। त्यो दिशातर्फ कामगर्दा परिवारमा खुसियाली बड्ने छ।
बृश्चिकः वृशचिक राशिहुन हरुले विशेषगरी वृष राशि हुने हरुसंग कामकारोबार गरेमा विशेष फईदा हुनेछ । मेष र मिथुन राशिहुने हरुसंगको कामकारोबार अलि कमजोर रहनेछ।
यिनी राशिसंग कामगरेमा अन्त्यमा नोक्सान हुनेहुनाले काम नगर्नु भएकै राम्रो हुनेछ। अरु राशिसंग मिलेर काम गर्दा फाइदाजनक हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामकारोबार गर्दा घर भन्दा उत्तर दिशामा गएर गरेका कामबाट सफलता मिल्नेछ।
धनुः धनुराशि हुनेहरुले विशेष गरि मिथुन राशि हुनेहरुसंग मिलेर काम गरेमा सजिलो संग काम पूरा हुनेछ। बृष र कर्कट राशि हुनेसंगको कुनैपनि कारोबार अन्तिममा पुरानहुदै रोकिने हुन्छ।
यी दुई राशि बृष र कर्कट बाहेकका अरु बाकी राशिहुने हरुसंगको संबन्घ राम्रो हुनेछ । बिवाहा गर्दा समेत राम्रो नहुने हुन्छ।
मकरः मकर राशिमा जन्मेका मानिस हरुका लागि कर्कट राशिहुने हरुसंगको सम्बन्ध निक्कै राम्रो मानिन्छ। तर मकर राशि हुनेहरुले मिथुन र सिंह राशि हुने हरुसंग काम नगरेकै राम्रो हुन्छ।
अरु राशिहुने हरुसंगको सम्बन्ध राम्रोनै मानिन्छ। मकर राशि हुनेहरुले बिशेष गरि दक्षिण दिशामा बसेरकाम गरेमा राम्रो हुने छ।
कुम्भः विशेषगरी कुम्भ राशिका मानिसले सिंह राशिहुने हरुसंगको सम्बन्ध राम्रो मानिन्छ ।तर कर्कट र कन्या राशिहुनेहरुसंगको सम्बन्ध भने नराम्रोनै मानिन्छ ।
पारिवारिक सम्बन्धकालागि बाकी रहेका राशिहरुसंगको सम्बन्ध राम्रो नै मानिन्छ। कुम्भ राशिहुनेहरुले पश्चिम दिशामा बसेरकाम कामगरेमा लाभ हुनेछ।
मीनः मीन राशिमा जन्मिएका मानिसहरुले विशेषगरी कन्या राशिहुने हरुसंगको सम्बन्ध निक्कै राम्रो मानिन्छ।
सिंह र तुला राशिहुनेहरुसंग बाहेक अरु राशिसंगको सम्बन्ध राम्रो नै मानिन्छ। विशेष प्रगतिको लागि उत्तर तथा पुर्व दिशाहरु लाभदायक हुनेछन्।
Last Updated on: February 5th, 2021 at 6:29 pm